Bolongaly plastika plastika boribory ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy rano Zhongtai
Bolibola Polyollow Hollow Ball ho an'ny fitsaboana rano
Ny fonosana Polyhedral Hollow Ball dia vita amin'ny plastika mahatohitra hafanana sy ny harafesin'ny simika, ary ny mari-pana fampiharana amin'ny haino aman-jery dia manomboka amin'ny 60 ka hatramin'ny 150 degre.
Ball Poly Poly Hollow Ball (PP, PE, PVC, CPVC, RPP) dia antsoina koa hoe baolina hollow plastika marolafy, fonosana poakaty polyaced hollow dia misy hemispheres roa izay ho lasa baolina. Ary ny hemisphere tsirairay dia misy ravina miendrika mpankafy antsasaky ny ravina ambony sy ambany ao anaty lamina mihoampampana. Mandroso ny hevitra famolavolana ary mirindra ny firafitra. Ny baoritra poakaty plastika plastika dia manana lanjan'ny lanja maivana, toerana malalaka malalaka, fanoherana ny rivotra kely, ary hydrofilika ambonimbony tsara, faritra feno lena mando feno ary famenoana ny fitaovana sy ny vokam-peo.
Plastika Hollow Ball plastika dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana maloto, famongorana ny CO2 amin'ny famokarana herinaratra, famotehana ary fanangonana tilikambo rano voadio. Ny bolongana poakaty misy lafiny plastika dia karazana fonosana tilikambo avo lenta ampiasaina amin'ny fitaovana fitsaboana rano.
Famaritana ara-teknika ny baoritra baolika plastika plastika
Baolina poakaty polyhedral
PP, PE, PVC, CPVC, RPP, sns
Size inch / mm
Fananana ara-batana sy simika an'ny Ball Polyollow Hollow
Ny fonosana tilikambo plastika dia azo alaina avy amin'ny plastika mahatohitra hafanana sy manimba harafesina, ao anatin'izany ny polyethylene (PE), polypropylene (PP), polypropylene (RPP), polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl chloride (CPVC), polyvinyiidene fluoride (PVDF) , ny mari-pana amin'ny haino aman-jery dia manomboka amin'ny 60 Degre C ka hatramin'ny 150 Degre C.
Ao anatin'ny 7 andro fiasana
10 andro fiasana
12 andro fiasana
Teo aloha: Fonosana baolina plastika Tri-Pak ho an'ny fitsaboana rano
Manaraka: Baolina mitsingevana plastika ho an'ny fitsaboana maloto
Fonosin'ny tilikambo Super Raschig plastika
Fonosana simika plastika Cascade kely
Kitapo plastika Pentagon Ring